सचेत बनौं ! कोरोनाले यसरी ध्वस्त पारिदिन्छ मानिसको फोक्सो ! (भिडियो) – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ ग्लोबल ∕ सचेत बनौं ! कोरोनाले यसरी ध्वस्त पारिदिन्छ मानिसको फोक्सो ! (भिडियो)
सचेत बनौं ! कोरोनाले यसरी ध्वस्त पारिदिन्छ मानिसको फोक्सो ! (भिडियो)
एजेन्सी चैत्र १४, २०७६ गते २१:२५ मा प्रकाशित
न्यूयोर्क – केही दिनअघिसम्म लक्षण नै नदेखाएका कोरोनाभाइरस संक्रमति मानिसको फोक्सो कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा भिडियोले देखाएको छ ।
जर्ज वासिंगटन युनिभर्सिटी अस्पतालका थोरासिस सर्जन डा. केथ मोटम्यानले भनेका छन्ः अहिले ती बिरामीलाई कोभिड–१९ लागेको छ र उनको फोक्सोले राम्रो काम गर्न छोडिरहेको अवस्था छ ।
भिडियोमा पहेलोले देखाइएको भागहरु फोक्साको संक्रमित र सुन्निएको भाग हो,’ मोर्टम्यान भन्छन्, ‘जब उसको फोक्सामा भाइरल इन्फेक्सन भयो, त्यो भागमा भाइरस पसेर बन्द भयो । स्क्यानबाट प्रष्ट हुन्छ कि त्यो संक्रमण फोक्सोको एउटा भागमा मात्रै सीमित छैन, यसले दुबै फोक्सोको ठूलो हिस्सालाई प्रभावित गरेको छ । युवाहरुलाई नै पनि कति छिटो र खतरनाक ढंगले सङ्क्रमणले असर गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ । स्वस्थ फोक्सो भएको एउटा युवामा अहिले बिग्रेर पहेलो देखिएको छ,’ उनले भनेका छन् । अहिले ती बिरामी अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा आइसीयूमा उपचाररत छन् ।